Paul's 1st Letter to Timothy – 2fish
ekhaya / Bible / ezincwadini / Paul's 1st Letter to Timothy
1 uTimoti 1
1:1 Paul, umpostile kaYesu Kristu ngegunya kaThixo uMsindisi wethu, neNkosi yethu uYesu Kristu,
1:2 ukuba uTimoti, unyana emnye, intanda elukholweni. Grace, sa, noxolo, oluvela kuThixo uYise, noKristu Yesu iNkosi yethu.
1:3 Ngoku ke wacela ukuba uhlale e-Efese,, ngoxa mna ndisiya kwelaseMakedoni,, ukuze athethe ngamandla nxamnye nabo abathile abaye ebefundisa ngendlela eyahlukileyo,
1:4 abo baye abebesoloko ingqalelo zintsomi namilibo yakuzalwa engaphele ndawo. Ezi zinto imibuzo ezikhoyo ngokungathi mkhulu lakheke ke obuphuma kuThixo, olungokholo.
1:5 Ke kaloku injongo myalelo iluthando oluphuma entliziyweni ehlambulukileyo, nesazela esilungileyo, kwaye i naselukholweni olungahanahanisiyo.
1:6 abantu abathile, ingena kude ezi zinto, ziye gu bucala ukuze esilavuzayo engenanto,
1:7 bethanda ukuba ngabafundisi bomthetho, kodwa phofu bengaziqiqi izinto bona ngokwabo bathi, noko ke unezihlabo ngezi zinto.
1:8 Siyazi ke ukuba umthetho mhle, ukuba omnye yenza ukusetyenziswa kwayo ngendlela eyiyo.
1:9 Ukwazi oku, ukuba umthetho singazange sibekwe endaweni ngenxa nje, kodwa ngenxa yabangemalungisa kunye nabangenakululama, elimisiweyo abangahloneli Thixo, kuba abangendawo kunye abaziinqambi, abo abenza patricide, matricide, okanye ukubulala,
1:10 ngokuba izifebe, ngokuba namadoda alale amadoda, ngokuba abaqweqwedisi, amaxoki, amafunga-buxoki, nayo nayiphi na enye into ichasene nemfundiso ephilileyo,
1:11 leyo pfumelelana ezilungileyo zozuko lukaThixo osikelelekileyo, iVangeli elinikwe kum.
1:12 Ndiya kubulela lowo kuye undomelezile, UKristu Yesu iNkosi yethu, kuba wandibalela ekuthini ndithembekile, ukuzibeka entsimini,
1:13 nakuba ngaphambili ndandingumnyelisi, nomtshutshisi, nokweya. Kodwa ke ndesuka ndenzelwa inceba kaThixo. Kuba mna ukuba senza ngokungazi, ekungakholweni.
1:14 Ke lwanda ngokuncamisileyo ubabalo lweNkosi yethu iye okwanda kakhulu, lunokholo nothando olukuKristu Yesu.
1:15 Kuyinto Lithembekile ilizwi, yaye lifanelwe kukwamkelwa nguye wonke, eli lokuba uKristu Yesu weza ehlabathini ukuba asindise aboni, phakathi I Ndingowokuqala.
1:16 Kodwa ngenxa yesi sizathu ukuba ndesuka ndenzelwa inceba, ukuze kum kuqala, NoKristu uYesu, konke ukuzeka kade, ngokuba uqeqesho kwabo baza kukholwa kuye, base ebomini obungunaphakade.
1:17 Ngoko ke, kuye uKumkani wawo amaphakade, ukuba le nkolelo, engabonakali, uThixo yedwa, makubekho imbeko nozuko, kuse emaphakadeni asemaphakadeni. Amen.
1:18 Lo mthetho kaloku ndimyaleza kuni, unyana wam Timoti, ngokuvumelana abaprofeti ababekho ngaphambi kwakho: ukuba ukhonza phakathi kwabo ngathi ijoni kwimfazwe elungileyo,
1:19 babambelele elukholweni kunye nesazela esilungileyo, nabo, ngokulahla ezi zinto, baye benza yinqanawa yokholo.
1:20 Phakathi kwezi inoHimenayo noAlesandire, endabanikelayo kuSathana, ukuze baqeqeshwe ukuba banganyelisi.
1 uTimoti 2
2:1 Kwaye ngoko ndiyanibongoza, Okokuqala, ukuba Ingatarhuzisa, imithandazo, izicelo, imibulelo, ngenxa yabantu bonke,
2:2 amakhosi, nabo bonke abahlala kwiindawo eziphakamileyo, ukuze sihlale ngokonwaba nangokuzola, sinokuhlonela uThixo zonke nobunyulu.
2:3 Kuba oku kuhle, kwamkelekile emehlweni oMsindisi wethu uThixo,
2:4 onga yena bangasindiswa bonke abantu bangasindiswa bafikelele ukuvuma inyaniso.
2:5 Kuba mnye uThixo, mnye nomlamli phakathi koThixo nabantu, umntu uKristu Yesu,,
2:6 lowo wazinikelayo ukuba abe intlawulelo zonke, njengoko isingqiniso ngexesha layo elifanelekileyo.
2:7 Of le ubungqina, Ndiye ndamiselwa njengomshumayeli nompostile, (Ndithetha inyaniso, Andixoki) abe umfundisi weentlanga, elukholweni nangenyaniso.
2:8 ngoko ke, Ndifuna abantu ukuba bathandaze kwindawo zonke, ephakamisa izandla ehlambulukileyo, engenangqumbo ukuphambana.
2:9 Ngokufanayo naye, abasetyhini kufuneka banxibe kahle, Ukuhomba bona kunye compunction yaye sizibambe, hayi iinwele nokunxitywa, negolide, nor neeperile, nor nesambatho esixabiso,
2:10 kodwa ngendlela efanele abafazi abo abathi bakholiwe esebenzisa ngemisebenzi emihle.
2:11 Umfazi makafunde ethe cwaka zonke wazithobela.
2:12 Kuba Andimvumeli umfazi ukuba afundise, okanye abe negunya phezu kwendoda, kodwa makathi cwaka.
2:13 Kuba kwabunjwa uAdam kuqala, ke ukubunjwa uEva.
2:14 Ke uAdam akazange wayenga, kodwa umfazi, sele owayenga, waba sekugqitheni.
2:15 Noko ke wosindiswa ngokunikela abantwana, ukuba uye waqhubeka elukholweni naseluthandweni, kwaye ebungcwaliseni kunye ukuzeyisa.
1 uTimoti 3
3:1 Kuyinto Lithembekile ilizwi: ukuba umntu sesithi episcopate, unqwenela umsebenzi omhle.
3:2 ngoko ke, kuyimfuneko ukuba ubhishophu ukuba ukusola, eyindoda yamfazi mnye, isile, onengqondo, onobabalo, bapha-, wokungenisa, umfundisi,
3:3 akukho inxila, akukho uyalwa kodwa ndazibamba, akukho ukuxabana, akukho ulibawa;
3:4 Ke umntu lowo okhokelela kakuhle eyakhe indlu, enabantwana aphantsi kwayo yonke ubumsulwa.
3:5 Kuba ukuba umntu akakwazi ukukhokela eyakhe indlu, indlela uya ukuphatha ibandla likaThixo?
3:6 Umele ukuba ikholwa elitsha, funa, kokuba vuyiswa yi likratshi, ingase iwe phantsi isigwebo boMtyholi.
3:7 Kwaye kufuneka ukuba kuye ukuba abe ungqinelwe ngabo abo bangaphandle, ukuze angabi nagaxeleka ezilingweni ngehlazo emgibeni umtyholi.
3:8 Ngokufanayo, Abalungiseleli kumele msulwa, bangabi ntlolela yombini, bangazinikeli kwiwayini eninzi, bengasukeli nzuzo sekunzima,
3:9 ebambelele nemfihlo yokholo ngesazela esihlambulukileyo.
3:10 Kwaye ezi zinto kufuneka kunokuveliswa ubungqina kuqala, baze emva koko babe, ukuba sikhubekisa.
3:11 Ngokufanayo, abafazi kufuneka msulwa, bangabi ngabatyholi, isile, bathembeke ezintweni zonke.
3:12 Abalungiseleli kufuneka ibe yindoda enomfazi omnye, amadoda kumbulali oonyana babo kunye nezindlu ezizezabo.
3:13 Kuba abo nilungiselele kakuhle baya kufumana ngokwabo umsebenzi olungileyo, kunye nokuzithemba kakhulu ngokukholwa kuKristu Yesu.
3:14 Ndinibhalela ezi zinto kuwe, ngethemba ukuba ndiya kuza kuwe kamsinya.
3:15 kodwa, ukuba ndithe ndalibaziseka, kufuneka uyazi indlela apho kuyimfuneko uziphathe endlwini kaThixo, yona ilibandla likaThixo ophilileyo, intsika njengesiseko senyaniso.
3:16 Kwaye bukhulu ngokucacileyo, le mfihlakalo ehlonipha, lowo wabonakalaliswa esenyameni, apho wagwetyelwa esemoyeni, nto leyo eye yabonakala kunezithunywa, leyo ethe wavakaliswa phakathi kweentlanga, leyo ekukholelwa ehlabathini, leyo ethe wenyuswa waba sebuqaqawulini.
1 uTimoti 4
4:1 Ke kaloku uMoya uthi ngokucacileyo ukuba, kumaxesha ekupheleni, abanye abantu baya kumka elukholweni, inyamekele oomoya yesiphoso kunye neemfundiso zeedemon,
4:2 ukuthetha ubuxoki uhanahaniso, ke isazela sabo,
4:3 umshado ovimba, ukuzila ukutya, uThixo udale ukuba yamkelwe ngombulelo likhoboka ngabo baye baqonda inyaniso.
4:4 Ngokuba sonke isidalwa sikaThixo sihle, asiyonto yakulahlwa leyo yamkelwe ngombulelo;
4:5 ngokuba singcwaliswa ngalo ilizwi likaThixo ndawonye nomthandazo.
4:6 Xa isindululo ezi zinto ukuba abazalwana, uya kuba ngumlungiseleli omhle kaYesu Kristu, wondliwe ngamazwi okholo, yaye imfundiso elungileyo ukuba bafumene.
4:7 Kodwa kulumkele iintsomi ezihlambelayo zamaxhegokazi zimangale of namaxhegokazi. Kwaye usebenzise wena ukuze phambili sinokuhlonela.
4:8 Kuba ekusebenziseni umzimba thile luncedo. Ke kona ukuhlonela uThixo luncedo ezintweni zonke, ebambe nesithembiso sobomi, kule langoku kwixesha elizayo.
4:9 Lithembekile ilizwi eli Lithembekile ilizwi eli, lifanelwe kukwamkelwa konke.
4:10 Ngenxa yesi sizathu yabasebenzi yaye bethetha kakubi: ngokuba sithembele kuThixo ophilileyo, onguMsindisi wabantu bonke, kakhulu ingakumbi abathembekileyo.
4:11 Yalela ezi zinto, ufundise.
4:12 Makungabikho namnye ubudelayo ubuncinane bakho, kodwa ube ngumzekelo phakathi abathembekileyo ngamazwi, ekuziphatheni, ngothando, ngokholo, nobunyulu.
4:13 Ndide ukufika, ukuya ku ukufunda, nokuyala, kunye nemfundiso.
4:14 Musa ukuba bakulungele singazihoyi ubabalo engaphakathi kuwe, leyo owasinikwayo ngesiprofeto, kunye nokubekwa izandla ezobubingeleli.
4:15 Camngca ngezi zinto, ukuze inkqubela yakho ibonakale kubo bonke.
4:16 Nikelani ingqalelo wena nemfundiso. Ukufezekisa ezi zinto. Kuba ngokwenjenjalo ke, uya kuzisindisa wena nabo bakuphulaphulayo.
1 uTimoti 5
5:1 Kufuneka ukuyithethisa indoda endala, kodwa kunokuba ndimangalelane naye, ngokungathi uyihlo; kunye nabafana, njengabazalwana;
5:2 kunye namaxhegokazi, ziineni; namabhinqa aselula, kuzo zonke ubumsulwa, njengoodadewabo.
5:3 Udumo labo abahlolokazi abangabahlolokazi bokwenyaniso.
5:4 Ke ukuba kukho mhlolokazi uthile unabantwana, nokuba ngabazukulwana, makabe naye kuqala ufunde ukusebenzisa indlu yayo, kwaye sifeze, ekujikeni, isibopho sakhe ukuze abazali bakhe; kuba oko kuhle, kwamkelekile emehlweni kaThixo.
5:5 Ke yena ongumhlolokazi ngenene yaye beswele, ke ithemba lakhe kuThixo, abe ongxamisekileyo ekukhungeni kunye nemithandazo, ubusuku nemini.
5:6 Kuba ngubani na ohlala iziyolo ufile, ube uhlala.
5:7 Kwaye ukunika umyalelo kule, ukuze babe ngaphaya nakukhalazeleka.
5:8 Kodwa ke ukuba ubani akukho inkxalabo ngenxa lakhe, yaye ngokukodwa abendlu yakhe, ulukhanyele ukholo, yaye unobubi ngaphezu kongakholwayo.
5:9 Ngamana ongumhlolokazi linokunyulwa ngubani akukho ngaphantsi kwe amathandathu eminyaka ubudala, ngubani owayengumfazi wandoda-nye,
5:10 ngubani na ubungqina ngemisebenzi emihle: ingaba wafundisa abantwana, okanye uye walungiselela iindwendwe, okanye ukuba uzihlambile iinyawo zabangcwele, okanye nakhonza nezo zihlutshwa imbandezelo, okanye sele landela naluphi na uhlobo lomsebenzi olungileyo.
5:11 Kodwa kulumkele abahlolokazi abancinane. Ngokuba xa bathe kwanda kuKristu, baya bafuna ukutshata,
5:12 okubangela yokulahlwa, ngenxa yokuba nayigatya igunya ukholo.
5:13 Yaye ngelo xesha noko lutho, bafunda ukuya kwindlu ngendlu, ukuba banganeli kungasebenzi nto kodwa, kodwa into engapheli kwaye ukwazi, ethetha izinto musa bona.
5:14 ngoko ke, Ndifuna ukuba abafazana ukuba batshate, okuzala abantwana, ukuba oomama iintsapho, ukunika ithuba alungele ochasayo ukuthetha okubi.
5:15 Kuba abathile baye kuvuliwe sele umva kuSathana.
5:16 Ukuba nayiphi na phakathi abathembekileyo ukuba abahlolokazi, makalungiselele kubo hayi umthwalo iBandla, ukuze kubekho kuba yanele abo abahlolokazi bokwenyaniso.
5:17 Ababingeleli abo bakhokelayo kakuhle kuqhutywa ufanelwe kabini nembeko, ingakumbi abo babulaleka ngenxa yenu, iLizwi kunye nemfundiso.
5:18 Kuba isibhalo sithi: "Uze ungayibophi umlomo inkomo njengoko kubhaliwe ibhula ukutya okuziinkozo,"kanye, "Ifanelwe umvuzo wakhe Umsebenzi na."
5:19 Musa ukuba ukulungele ukwamkela isityholo nombingeleli, ngaphandle ngezwi lamangqina amabini, nokuba mathathu.
5:20 Bohlwaye aboni emehlweni wonke, ukuze nabanye aba babe nokoyika.
5:21 Ndiyakuqononondisa emehlweni kaThixo, neNkosi yethu uYesu Kristu, nezithunywa zezulu ezinyuliweyo, ukuba uzigcine ezi zinto ungaqali ugwebe, ungenzi nto leyo ebonisa buso ngapha nangapha.
5:22 Kufuneka ukuba sikhawuleze ukubeka izandla phezu nabani, yaye kufuneka uthathe inxaxheba izono abangaphandle. Gcina umsulwa.
5:23 Musa ukuqhubeka ukuba sasela manzi, kodwa sebenzisa iwayini encinane, ngenxa yesisu sakho, nobulwelwe bakho obufuthi.
5:24 Izono zabanye abantu ibonakalisiwe, ziyandulela ukuya emgwebeni, kodwa abanye zibonakalaliswe kamva.
5:25 Ngokufanayo, kakhulu, imisebenzi emihle ibonakalisiwe, kodwa naxa zingekho, abakwazi zisala zifihlakele.
1 uTimoti 6
6:1 Nabani na ke amakhoboka aphantsi kwedyokhwe, makhe nabo abaphathi babo ukuba bafanelwe yimbeko yonke, ukuba hleze igama kunye imfundiso yeNkosi linyeliswa.
6:2 Kodwa abo ke ankosi zikholiweyo, ekunyabeni kwabo makangazideli ngakuba abazalwana, kodwa kunokuba babakhonze zonke ngakumbi ngenxa yokuba zingamakholwa, intanda, nxaxheba ezifanayo
inkonzo. Bafundise ezi zinto.
6:3 Ukuba umntu ufundisa ngenye, kwaye angavumani namazwi aphilileyo angaweNkosi yethu uYesu Kristu, kwaye ukuba imfundiso leyo ngokuvumelana bakholiwe,
6:4 ke unenkani, engazi lutho, kodwa ogqunywe phakathi imibuzo kunye neengxabano yamagama. Kulaba kuvela umona, kuxabana, yokuhlambalaza, izirhano ezingendawo:
6:5 kwiimpixano abantu abaye abonakele iingqiqo nabahluthwe inyaniso, ngubani ingqalelo inzuzo ukuba elabo.
6:6 Kodwa ukuhlonela uThixo, kundawonye nokwanela, kusekeleze inzuzo enkulu.
6:7 Kuba sibe singangenanga nanto ehlabathini, kwaye akukho mathandabuzo ukuba singathatha nento.
6:8 kodwa, ukudla ukuba abanye uhlobo ukuyigubungela, sifanele masaneliswe zezo.
6:9 Kwabo bafuna ukuba zizityebi beyela ekuhendweni kungena emgibeni uMtyholi, nasezinkanukweni ezininzi engenamsebenzi eyingozi, leyo safaka abantu ekonakaleni kwaye nasekutshabalaleni.
6:10 Kuba umnqweno yingcambu yazo zonke ezimbi. abanye abantu, ulambile ngale ndlela, baye babhadula elukholweni baza bexabene ngokwabo xa besentlungwini ezininzi.
6:11 kodwa wena, Mntundini kaThixo, saba kwezi zinto, kwaye afune ngokwenene ubulungisa, bakholiwe, ukholo, sa, umonde, ukulunga.
6:12 Yilwa umlo omhle wokholo. Thatha ubambelele ubomi obungunaphakade ukuba enabizwa, aze enze umsebenzi omhle ukholo phambi kwamangqina amaninzi.
6:13 Ndiyakuyala, emehlweni kaThixo, ngubani ezenza zonke izinto, kwaye emehlweni kaKristu Yesu, abathi banika ubungqina umsebenzi olungileyo phantsi koPontiyo Pilato,
6:14 ukuba niwenze umthetho, esesesizalweni, irreproachably, ke ukubuya kweNkosi yethu uYesu Kristu.
6:15 Kuba ngexesha elifanelekileyo, uya asombulule Amandla esikelelekileyo kuphela, iKumkani yeekumkani, iNkosi yamakhosi,
6:16 ngubani yedwa ibamba ukungafi, kwaye ngubani ohlala ukukhanya wefilosofi, ekungekho namnye umntu owakha wambona, ngisho uyakwazi ukubona, elulolwakhe uzuko namandla obungunaphakade. Amen.
6:17 Yalela azizityebi kule ubudala ukuba abe uyazazisa, nokuba nethemba ukungaqiniseki ubutyebi, mabathembele kuThixo ophilileyo, ngubani usinika yonke into eninzi ukuze,
6:18 nokuba ukwenza okulungileyo, ukuba abe zizityebi ngemisebenzi emihle, ukuba inikele lula, ukwabelana,
6:19 ukuqokelela ngokwabo ubuncwane isiseko esihle sekamva, ukuze bafumane ubomi.
6:20 uTimoti, unogada oko ibifakwe kunye nawe, sikuphephe ilizwi sezipho, ezihlambelayo, le nkolelo, ezo kuxokwa ulwazi.
6:21 abantu abathile, ithembisa ezi zinto, baye batshabalala elukholweni. Ubabalo malube nani. Amen.
EyeDwarha 14, 2019
EyeDwarha 13, 2019
EyeDwarha 12, 2019
EyeDwarha 11, 2019
EyeDwarha 10, 2019